နမ်းလိုက်တော့မယ်နော် (စ/ဆုံး) – Grab Love Story
Crd : ကာမမင်းသား
ဟယ်.င့ါပန်းပင်လေးတွေကုန်ပါပြီ.. မေမေ မေမေ.လာပါအုန်း.ဒီမွာ ဇာလေး ပန်းပင်လေးတွေ ကုန်ပြီ.. အိမ်ရှေ့ပေါ်တီအောက်မှ စီကနဲထွက်ပေါ်လာသော အသံစူးစူးလေးကြောင့် ပန်းပင်တွေကြား ငုတ်တုတ်ထိုင်၍ နှင်းဆီအိုးတွေအောက်တွင် အုတ်ခဲတွေခုနေသော မြင့်ကျော်တစ်ယောက် လှမ်း၍ကြည့်မိလိုက်သည်။ပြီးတော့ သူ့မျက်နှာက တဖြေးဖြေးပြုံးဖြီးဖြီးကြီးဖြစ်လာသည်။ တော်တော်လှတာပဲ..ဟင်း အသက်(၁၈)နှစ်အရွယ် ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ကောင်မလေးတစ်ယောက်ခုန်ဆွခုန်ဆွနှင့်စပ်မထိဖြစ်နေသည်။ ထိုစဉ်မှာပင် အိမ်ထဲမှ အသက်လေးဆယ်အရွယ် ဖြူဖြူ၀၀အမျိုးသမီးကြီး တစ်ယောက်ထွက်၍လာသည်။ ဟဲ့ သမီး.ဘာဖြစ်နေတာလဲ ဒီမွာ မေမေ မတွေ့ဘူးလား.သမီး ဇီဇ၀ါပင်တွေ ငုတ်တိုပဲကျန်တော့တယ်..
ဟိုတောသားလက်ချက် မဟုတ္လား. ဇာလေးဖြူ ငိုသံပါနှင့်ပြောနေသည့်ကြားက နောက်ဆုံးစကားတွင်ဒေါသသံက ပါလာသည်။ မြင့်ကျော် အုတ်ခဲတစ်လုံးကိုလှမ်းယူရင်း ဇက်ကလေးပုသွားသည်။ ဟယ်..ဇာလေးကလဲ.မေမေခိုင်းလို့သူလုပ်ရတာဘဲကွယ်..သမီးပန်းပင်တွေကလဲပြန်ပြီးတက်လာမှာပဲဟာ..နောက်ပြီး ကိုယ့်အစ်ကိုဘဲ တောသား တောသားနဲ့ မခေါ်ပါနဲ့သမီးရယ်.. ဟွန်း.. ဇာလေးဖြူ မျက်စောင်းခဲ၍ နှုတ်ခမ်းစူပစ်လိုက်သည်။ ထိုအချိန်မှာပင် အိမ်ကြီးအတွင်းမှ အသံသြသြကြီးဖြင့် ယောင်္ကျားကြီးတစ်ယောက်၏အသံထွက်၍လာသည်။ သမီး.ဇာလေး.ခဏလာအုန်း ဇာလေးဖြူမျက်နှာပျက်သွားပြီး မသွားချင်သွားချင်ခြေလှမ်းမျိုးဖြင့် အိမ်ထဲသို့ ၀င်လာခဲ့သည်။ ဧည့်ခန်းထဲတွင်တော့ အသားညိုညို ဗိုက်ရွှဲရွှဲဖြင့် အသက်(၄၀)ကျော်အရွယ် ယောင်္ကျားကြီးတစ်ယောက်ထိုင်၍ နေသည်။ လာသမီး ထိုင် ဇာလေးဖြူ ကုလားထိုင်တစ်လုံးတွင် ၀င်၍ထိုင်လိုက်သည်။ သမီး စာတွေလိုက်နိုင်ရဲ့လား ဟုတ်ကဲ့. မလိုက်နိုင်ရင် မောင်မြင့်ကျော်ကို ပြခိုင်း ဖေဖေကလဲ.. ကိုဘကောင်းကလဲ ကျွန်မသမီးက စာတော်ပြီးသားပါ. ခုမွ ဧည့်ခန်းထဲရောက်လာပြီး ကုလားထိုင်တွင် ၀င်ထိုင်လိုက်သော အမျိုးသမီးကြီးက၀င်၍ ပြောလိုက်သည်။ ဦးဘကောင်း၏ မျက်နှာကြီး မဲ့သွားသည်။ နောက်ပြီး သမီးကို ဖေဖေပြောရအုန်းမယ်. တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဆိုပြီး ယောင်္ကျားလေး သူငယ်ချင်းတွေထားတာလဲ သတိထားအုန်း ဟို မောင်သော်ဇင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးက တယ်မဟန်ဘူးလို့ ကြားတယ်. ဇာလေးဖြူ သူ့အဖေမျက်နှာကိုငေါက်ကနဲ မော့ကြည့်သည်။
ဒါ..ဒါ .ဟိုတောသားဂုံးချောတာ မဟုတ္လား ဘယ်တောသားလဲ သမီးက မောင်မြင့်ကျော်ကိုပြောတာ ကိုဘကောင်းရေ. သမီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အတြက္က ကျုပ်ပြောပါ့မယ် ကိုဘကောင်းရယ်.. ရှင့်မလဲ.. ဟင်း.ဘာပြောမှာလဲ ..မင်းမပြောလို့ ငါပြောနေရတာ မခင်စန်း. မခင်စန်းထပ်ပြီး အထွန့်တက်ရန်ပါးစပ်ပြင်လိုက်ပြီးမှ ဘာမှမပြောပဲ အသာငြိမ်နေလိုက်သည်။ အထွန့်တက်လိုက်မည်ဆိုပါက ဒီနေ့ ကိုဘကောင်း တစ်နေ့လုံးအိမ်တွင် ရှိမည်ဖြစ်၍ တစ်နေကုန်မပြီးနိုင် မစီးနိုင် တဗြစ်တောက်တောက် ပြောဆိုနေမည်ကို ဒေါ်ခင်စန်းကသိထားလေသည်။ သမီးက မောင်မြင့်ကျော်ကို တောသားပြောတော့ သမီးကလဲဘယ်မှာမွေးတာလဲ .. မောင်မြင့်ကျော်နဲ့ တစ်ရွာထဲဘဲမို့လား. ဟွန်း..သမီးတို့က ရန်ကုန်ကိုငယ်ငယ်လေးထဲက လာနေတာ..သူကခုမွ အဲ့ဒါ မောင်မြင့်ကျော် အဖေသန်းရွှေကောင်းလို့ ဖေဖေတို့မိသားစုခုလို ရန်ကုန်မှာတင့်တင့်တယ်တယ် နေနိုင်တာပေါ့ ဖေဖေကလဲ ပြောလိုက်ရင် ဒီဘူတာပဲ စိုက်လာတာပဲ. သမီး ကျောင်းချိန်နီးပြီ သွားတော့မယ်.. တယ်လဲခက်တဲ့ခလေးဘဲ.. အစချီကာ ဦးဘကောင်းမှာ တဗြစ်တောက်တောက်ပြောရင်း ဧည့်ခန်းထဲတွင် ကျန်ခဲ့လေသည်။ ဇာလေးဖြူထသွားသည်နှင့် ဒေါ်ခင်စန်းလဲထိုင်ရာမှထကာ ဧည့်ခန်းထဲမှ ထွက်သွားကြလေပြီဖြစ်သည်။
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx မြင့်ကျော်၏ အဖေဦးသန်းရွှေနှင့်ဦးဘကောင်းတို့မှာ မုံရွာမြို့နယ် ရွာလေးတစ်ရွာမှ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ ဖြစ်လေသည်။ အရွယ်ရောက်လာတော့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မိုးကုတ်တွင် ငါးနှစ်ကြာလောက် ကျောက်တွင်းအလုပ်ကို သွားလုပ်ခဲ့ပြီးပြန်လာတော့ သိန်းတန်ကျောက် တစ်လုံးရလာခဲ့သည်။ ရွာသို့ရောက်လာတော့ ဦးသန်းရွှေက အရင်အိမ်ထောင်ကျပြီး နောက်ဦးဘကောင်းက မခင်စန်းနှင့်အိမ်ထောင်ကျသည်။ ဦးသန်းရွှေက မြင့်ကျော်ကိုမွေးပြီး(၅)နှစ်အကြာ ဦးဘကောင်းက ဇာလေးဖြူကိုမွေးသည်။ ကလေးတွေကိုချီထားရင်း သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆုံမိလျှင် မင်းသားနဲ့ငါ့သမီး၊ ငါ့သမီးနဲ့မင်းသား ကြီးလာရင်ပေးစားမယ်ဟု မကြာခဏနောက်ပြောင်ကျီစယ်တတ်လေသည်။ ဇာလေးဖြူ (၅)နှစ်သမီးအရွယ်တွင် ရန်ကုန်သို့ပြောင်း၍ အခြေချရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ထိုအခါ ဦးသန်းရွှေက ရွာတွင်ပင်ဆက်၍နေမည်ဖြစ်သဖြင့်ငွေများများမလိုကြောင်းနှင့် ရန်ကုန်သို့ပြောင်းမည့် ဦးဘကောင်းအတွက် သူရထားသည့်ဝေစုထဲက ငွေတစ်ဝက်ကို ပေးလိုက်လေသည်။ မြင့်ကျော် ဆယ်တန်းအောင်တော့ စက်မှုတက္ကသိုလ် တက်ခွင့်ရသဖြင့်ရန်ကုန်ရှိ ဦးဘကောင်းအိမ်သို့ ပို့လိုက်သည်။ နောက် ဇာလေးဖြူကလဲ (၁၀)တန်းအောင် သွားပြီး ၀ိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်တွင် သင်္ချာအဓိကနှင့် တက်နေပြီဖြစ်သည်။
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx တက္ကသိုလ်ကင်တီးတွင် ပျားပန်းခတ်မျှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများပြည့်နှက်နေသည့်ကြားတွင် ဇာလေးဖြူနှင့်သူငယ်ချင်းတစ်စုမှာ ဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင် ၀ိုင်းဖွဲ့၍ထိုင်ကာ အသုတ်စားနေကြသည်။ ဇာလေး. ဘာလဲ မေခင် အော်..မင်းအစ်ကိုက တော်တော်ချောတာပဲ.. တို့နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါလား. မြင့်ကျော် ဟိုတစ်နေ့က သူမကိုလိုက်ပို့ရင်း မိန်းထဲသို့ရောက်ပြီးကတဲက ဒီကောင်မတွေ ဒီစကား ခဏခဏပြောသည်။ ဟုတ်တယ်လေ ဇာလေးရ. သူက R.I.T ကမို့လား.. သဘောလဲကောင်းပုံရတယ်.. ဒီတစ်ခါလာရင် ငါဒကာခံပါ့မယ်.. ထမင်းအတူစားကြရအောင်.. ဟုတ်တယ်..သူဇာပြောတာ မေခင်ထောက်ခံတယ်.. ဟွန်း ကောင်မတွေ တော်တော်နံ့နေကြ.. ဇာလေးဖြူ မျက်စောင်းထိုးပြီး ပြောပစ်လိုက်သည်။ မြင့်ကျော်နှင့်သူမတို့ အကြောမတည့်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ်သဲနေတာမြင်ရတော့ ဇာလေးဖြူစိတ်ထဲသ၀န်တိုသလိုတော့ဖြစ်မိသား။ ဒါနဲ့ ဇာလေး ငါသတင်းတစ်ခုပြောရအုံးမယ်.. မင်းစိတ်မကောင်းတော့မဖြစ်နဲ့.. မင်း သော်ဇင်ဆိုတဲ့ကောင် တနင်္ဂနွေနေ့က ပပ၀င်းရုံထဲကနေ အီကိုက အေမီကျော်နဲ့တွဲပြီး ထွက်လာတာတွေ့တယ်. မေခင်စကားက ဒီတင်ရပ်သွားသည်။ ဇာလေးဖြူထံမှ ဘာစကားမှထွက်မလာသော်လည်း မေခင်ကိုကြည့်နေသော ဇာလေးဖြူ၏ မျက်ဝန်းများထဲတွင် အရည်လေးတွေ ရစ်ဆိုင်း၍သွားသည်။ ပြီးမှ ဇာလေးဖြူက.. ဟင်း..သူ့ကို ငါကတွဲနေပေမယ့် ခုထိအဖြေမှ မပေးသေးတာဟာ. ဟင် မင်းတို့ကလဲ. ကဲ.အတန်းချိန်နီးပြီ.ပိုက်ဆံရှင်းပြီး သွားကြစို့ ဇာလေးဖြူက ကျသင့်ငွေကိုထုတ်ရှင်းပြီး စားသောက်ဆိုင်တန်းမှထွက်လာခဲ့ကြလေသည်။ အမှတ်(၉) ဟီးနိုးကားကြီး မာလာဂိတ်တွင် ရပ်လိုက်သည်။ ကားပေါ်မှ မြင့်ကျော်နှင့်ဇာလေးဖြူတို့ ဆင်းလာကြသည်။ ဟင်.ဘယ်လိုက်ဦးမလို့လဲ ကျောင်းထဲကိုလေ. ဇာလေး ဘာသာသွားတတ်ပါတယ်. အစ်ကိုပြန်တော့. ဟင်.ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ. မသိဘူး.အစ်ကို ယုဒဿန်ဘက်ကူးတော့ဇာလေး ဒီကရပ်ကြည့်နေမယ်..အစ်ကို ကားပေါ်တက်သွားပြီးမှ ဇာလေးကျောင်းထဲဝင်မယ်. မြင့်ကျော် လမ်းကိုဖြတ်ကူးရင်း ယုဒဿန်ရှေ့ပလက်ဖောင်းတွင် ရပ်လိုက်သည်။ ထိုစဉ် အမှတ်(၉) ဟီးနိုးကားကြီးရပ်လာ၍ မြင့်ကျော် ကားပေါ်တက်ပြီးပြန်လာခဲ့လေသည်။ ဘယ်လိုလဲ ကိုသော်ဇာလေးပြောတာ ရှင်းတယ်နော်.တွေ့တဲ့သူက အသေအချာကိုတွေ့တာ မငြင်းချင်နဲ့. ဇာလေးဖြူ၏စကားကြောင့် သော်ဇင် ဘာဆက်ပြောရမည်မှန်းမသိတော့ပေ။ သော်ဇင်သိသည်ကတော့ အရမ်းလှသော ဇာလေးဖြူကိုလက်လွတ်မခံနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဇာလေးဆီကအဖြေကိုတော့ ကိုသော် မမျှော်လင့်ပါနဲ့တော့ပြီးတော့ ဇာလေးကိုလဲ မဆက်ဆံပါနဲ့တော့.ကဲ ကျွန်မသွားမယ်. ဟို.နေ.နေပါအုံး.ကိုသော့်ကို ဇာလေးအခွင့်ရေးလေးတစ်ခုတော့ပေးပါ. ဘာလဲ. 😠 အဲ့ဒီ အေမီကျော်ဆီကို ဇာလေးခဏလောက် လိုက်ခဲ့ပါလား ဇာလေးအထင်လွဲနေတာတွေ သူနဲ့တွေ့ရင်ရှင်းသွားမှာပါ.
သူနဲ့တွေ့ပြီးရင် ဇာလေးယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ.. ဇာလေးသဘောပါ. ခဏတော့လိုက်ခဲ့ပါလား.. တစ်ဖက်သတ်များဆန်နေမလားဟူသော သံသယက ဇာလေးဖြူ သူမကိုယ်သူမမြင်မိလိုက်သည်။ အင်းလေ.ကောင်းပြီလေ. ကဲ..ကားပေါ်တက် သရီးတူးသရီး အပြာရောင်ကားလေးက ဘွဲ့နှင်းသဘင်နောက်ဖက်အင်းယားစောင်းမှ မောင်း၍ထွက်လာခဲ့လေသည်။ နောက်မကြာမှီမှာပင် အင်းစိန် ခ၀ဲခြံထဲမှခြံဝင်းတစ်ခုထဲချိုးဝင်လိုက်သည်။ တစ်ထပ်တိုက်ပု လေးတစ်လုံးရှေ့တွင် ရပ်လိုက်ပြီး သော်ဇင်ကကားပေါ်မှဆင်းပြီး အိမ်ရှေ့သို့ အလျှောက်အထဲမှထွက်လာသော ကရင်ကြီးတစ်ယောက်နှင့်တွေ့လိုက်ရသည်။ သော်ဇင်ဘာပြောလိုက်သည်မသိ။ ကရင်ကြီးခြံဝဖက် သို့ ထွက်သွားသည်။ အေမီကျော် ဟိုဖက်လမ်းသွားနေတာ.. သွားခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်.လာ. အိမ်ပေါ်က စောင့်ရအောင်လား. ဇာလေးဖြူ ကားထဲမှထွက်လိုက်ပြီး သော်ဇင်နှင့်အတူ အိမ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့လေသည်။ အိမ်ထဲရောက်တော့ ဇာလေးဖြူက ဧည့်ခန်းထဲတွင် ထိုင်ချလိုက်သည်။ ခဏလေးနော် သော်ဇင်ကပြောပြီးအိမ်အတွင်းဖက်သို့ဝင်သွားသည်။ ကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ယာလိုဖြစ်နေသော သော်ဇင်အား ဇာလေးဖြူနဲနဲတော့အမြင်ဆန်းနေပြီးစိတ်ထဲမှလည်း သံသယစိတ်တွေပိုပြီးဖြစ်လာမိသည်။ ဧည့်ခန်းထဲ သို့ ဇာလေးဖြူအကဲခတ်မိသည်။ နိုင်ငံခြားအမျိုးသမီးများ၏ မလုံ့တလုံ ပိုစတာကြီးများသာ နံရံတွင်ကပ်ထားသည်။ မိသားစုဓါတ်ပုံများကို မတွေ့ရ။ ဇာလေးဖြူစိတ်ထဲ မသိုးမသန့်ဖြစ်၍လာသည်။ (၁၀)မိနစ်လောက်ကြာတော့မှ သော်ဇင် အိမ်အတွင်းဖက်မှပြန်ထွက်လာသည်။ ဇာလေးဖြူထိုင်ရာမှ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်သည်။ ကျွန်မ ပြန်တော့မယ် ကိုသော် အိုး.နေပါအုန်း ခဏ သူမရှေ့သို့ သော်ဇင်ရောက်လာသည်။ သူမနှာခေါင်းဝသို့ အရက်နံ့ကထောင်းကနဲ ၀င်၍လာသည်။ ကျွန်မပြန်မယ် ဘတ်စ်ကားနဲ့ဘဲ ပြန်မယ်.. နေပါအုန်းဆို. အိမ်ပေါက်ဝဖက်သို့လှည့်ထွက်သော ဇာလေးဖြူအား သော်ဇင်က အတင်းလှမ်းဆွဲလိုက်ပြီး တစ်ပါတည်းသူ၏ ရင်ခွင်ထဲသို့ဆွဲ၍သွင်းလိုက်သည်။ လွှတ်..လွှတ်..လွှတ်ဆို.ခွေးကျင့်ခွေးကြံနဲ့ ကဲဟာ. ဖျန်း..ဖျန်း သူ့ရင်ခွင်ထဲရောက်လာသော ဇာလေးဖြူအား သော်ဇင်ကအငမ်းမရငုံ့၍နမ်းသည်။ ဇာလေးဖြူက ရုန်းလဲရုန်း မျက်နှာလေးကိုလည်းရှောင်ဖယ်ရင်း သော်ဇင်၏ပါးနှစ်ဖက်အား ဘယ်ပြန်ညာပြန် ရိုက်ပစ်လိုက်သည်။ ပါးရိုက်တယ် ဟုတ္လား.နင်ကရိုက်တော့ ငါကကဲ. ခွပ်အေမ့.အ. ဇာလေးဖြူ ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ပုံလ်က်သား ကျသွားပြီးသတိမေ့သွားသည်။ ပျော့ခွေ၍နေသော ဇာလေးဖြူ၏ကိုယ်ပေါ်မှအ၀တ်အစားများကို တစ်လွှာချင်းချွတ်ပစ်လိုက်သည်။ သူမ၏ ခန္ဓာကိုယ်လေးက အချိုးအစားပြေပြစ်လွန်းလှသည်။ ပကတိစင်းလုံးချော မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း ဖုထစ်ဖောင်းကားကာ ဖြူဝင်းမွတ်ညက်၍နေသည်။ ဆီးခုံမှအမွှေးနုလေးများကဖီးသင်ထားသလို အစီအရီလေးဖြင့်ကဗျာဆန်လှ၊ ချစ်စရာကောင်း လှသည်။ အမွှေးလေးတွေကို လက်ဖ၀ါးဖြင့် ရွရွလေးပွတ်ကြည့်သည်။ နူးညံ့နွေးထွေး၍နေသည်။ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးနှစ်ဖက်က လေထိုးထားသော ပူဖောင်းလေးများနှယ် လက်ညှိုးထိပ်နှင့်ထိုးကြည့်တော့ အိဝင်သွားပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ချိန် ဖောင်းတက်လာသည်။ ပေါင်နှစ်ဖက်ထိပ်ထိ ကျယ်ပြန့်စွာပြေလျောသွားသော စောက်ဖုတ်လေးက ချက်အောက်ဗိုက်သားရစ်လေးထိ မို့ဖောင်း၍နေသည်။ အကွဲကြောင်းလေးက နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေး ထင်း၍နေသည်။ လှလိုက်တဲ့ ကောင်မလေး. တစ်ကိုယ်တည်းရေရွတ်လိုက်ပြီး ထွေးအိနေသောစောက်ဖုတ်လေးအား သော်ဇင်ငုံ့နမ်းလိုက်သည်။ မေ့မျောနေသော မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုသူတစ်ဖက်သတ်မလုပ်လို။ နူးနှပ်နှိုးဆွပြီးမှ သူကောင်းကိုယ်ကောင်း လုပ်ချင်သည်။ ထို့ကြောင့် သော်ဇင်က ဇာလေးဖြူ၏ စောက်ဖုတ်အုံလေးကို လျှာအပြားလေးဖြင့် ယက်တင်လိုက်သည်။ ဇာလေးဖြူ၏ ပေါင်ဖြူဖြူလေးနှစ်ဖက်စေ့၍ကပ်သွားသည်။ နှုတ်ခမ်းသားဖောင်း ဖောင်းလေးတွေက စေ့ကပ်ပြီးနေလေတော့ စောက်စေ့လေးက အကွဲကြောင်းထဲတွင် မြုပ်၍နေသည်။ သော်ဇင်က စောက်စေ့လေးရှိရာကိုမှန်းပြီး လျှာဖျားလေးနှင့်ထိုးလိုက်ပြန်သည်။အ ကနဲအသံလေးနှင့်အတူ ပေါင်နှစ်ဖက်ဘေးသို့ ကားထွက်သွားသည်။ ဒီတော့စောက်စေ့လေးက ငေါက်တောက်လေးပေါ်၍လာသည်။ သော်ဇင်က စောက်စေ့လေးကိုနှုတ်ခမ်းဖြင့် ခပ်ဖိဖိလေးညှပ်ယူကာ လျှာဖြင့်ကလိလိုက်ကာ သကြားလုံးစုပ်သလို တပြွတ်ပြွတ်စုပ်ပေးလိုက်သည်။
ဇာလေးဖြူ၏ လှပသောအ၀တ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးက လူလိမ့်တွန့်လိမ်၍သွားသည်။ ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကလည်း လူးလွန့်ရင်းအပေါ်သို့ ကွေးတင်လိုက်ပေရာ စောက်ဖုတ်လေးမှာ ပြဲအာသွားပြီး စောက်ဖုတ်အတွင်း သားရဲရဲလေးများကို ဖြတ်ကနဲတွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုအခါ သော်ဇင်က စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့လျှာကိုလိပ်သွင်းပြီး စုပ်ပေးလိုက်ရာ ဇာလေးဖြူ၏ကိုယ်လုံးလေး တုန်တက်သွားသည်။
ဖင်စအိုလေးပေါ်လာသည်အထိ စောက်ဖုတ်လေးက ကြွကြွတက်သွားသည်။ အလိုမတူပါပဲလျက် နှိုးဆွထိတွေ့မှုတွေကြောင့် ဇာလေးဖြူ၏သွေးသားများ ကာမရေစုန်တွင်မျောလေပြီ။ အားရပါးရ တပြတ်ပြတ်အ သံမြည်အောင် လျက်ပေးနေသော လျှာနွေးနွေးကြီးကြောင့် စောက်ခေါင်းထဲ၌ ပြစ်ချွဲချွဲအရည်ကြည်များစိမ့်ယိုထွက်ကျလာရပေသည်။ ဇာလေးဖြူမှာ ထကြွသောင်းကျန်းလာသော သွေးသားများကြောင့် လီးတစ်ချောင်း၏ လိုးသွင်းမှုကို တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမခံစားဖူးခဲ့သော်လည်း လီးတစ်ချောင်းနှင့်ပယ်ပယ်နယ်နယ်လိုးသည်ကိုခံချင်စိတ်များ တဖွားဖွားပေါ်ထွက်လာလေသည်။
အသက်ကိုအောင့်ပြီး ခါးကိုကော့ကာစောက်ဖုတ်ထဲသို့ ထိုးသွင်းကလိပေးနေသော လျှာဖျားကြီးကို စောက်ဖုတ်နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ဖက်ဖြင့် တစ်အား ညှပ်ယူဆွဲလိုက်မိသည်။ သဘာဝစွမ်းအားက ကြီးမားလှသည်။ ဖွေးဖွေးဖြူသော တင်သားကြီး နှစ်လုံးကြားမှ စအိုပေါက်နီနီရဲရဲလေးမှာ ရှုံ့ဝင်သွားလိုက်ပြန်ကန်ပြီးထွက်လာလိုက်နှင့် ရှုံ့ချီပွချီဖြစ်နေသည်။ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသား နှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖြဲပြီး အတွင်းသား
လေးများကို လျှာဖြင့်ထိုးထိုးယက်ပေးသည်။ ချွဲကျိပြစ်နွေးသော အရည်ကြည်လေးများကို မျိုချပစ်လိုက်သည်။
သော်ဇင်က ခံချင်လာပြီလားဟုမေးလိုက်သောအခါ မဆိုင်းမတွ`အင်းဟုပြန်ဖြေလိုက်ပြီးမှ ဇာလေးဖြူ တဟင့်ဟင့်ငိုချလိုက်မိသည်။ ဇာလေးဖြူ၏ ၀တ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးလေးကို အရသာခံကြည့်ရင်း
သော်ဇင်မှာသူ့ကိုယ်ပေါ်မှအ၀တ်အစားများကို စိမ်ပြေနပြေချွတ်သည်။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ၀တ်လစ်စလစ်လေးဖြစ်နေသော ဇာလေးဖြူမှာ သော်ဇင်ကိုကြည့်ရင်းလက်ဆစ်လေးတွေကို တစ်ဖြောက်ဖြောက်ချိုးလိုက်၊ ထောင်ထားသော ဒူးနှစ်ဖက်ကို စုလိုက်ကားလိုက်ဖြင့်လုပ်လိုက်၊ စိတ်မရှည်နိုင်သလိုလှုပ်ရှား၍နေသည်။
မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ကိုယ် မနာအောင်လုပ်ပေးမယ်နော် ပေါင်လေးကားပေးထား
သော်ဇင်က ပြဲလန်နီရဲနေသော လီးထိပ်ကြီးကို ရွစိစိဖြစ်နေသည့်စောက်ဖုတ်ဝလေးသို့တေ့သွင်းလိုက်သည်။
ဒစ်ဝင်ရုံမျှဖြင့် မနာသော်လည်း လန့်ပြီး အော်လိုက်မိခြင်းဖြစ်သည်။ ရှက်စိတ်ကြောင့်လဲ အသားလေးများတုန်နေသည်။ လီးဒစ်ကြီးက စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးကြားသို့ နစ်ဝင်ရုံမျှဝင်သွားသည်နှင့် လီးကြီးကို အကွဲကြောင်းအတိုင်း အထက်အောက် ဆွဲမွှေပစ်လိုက်သည်။
ဇာလေးဖြူ၏ နှုတ်ခမ်းများ တစ်ဖျတ်ဖျတ် တုန်ခါနေကြသည်။ နီစွေးသော နှုတ်ခမ်းလေးများဟကာ လျှာဖျားလေးနှင့် ယက်ပေးနေမိသည်။ စောက်ပတ်အ၀မှ လီးကြီး၏ အထိအတွေ့အာရုံမှာ ဇာလေးဖြူ၏ တစ်ကိုယ်လုံး ဖိန်းရှိန်း၍နေ၏။
နာကျင်လိမ့်မည်ကြိုသိထား၍ အသက်အောင့်ထားသည့်ကြားမှ ဇာလေးဖြူတစ်ကိုယ်လုံးဆတ်ကနဲတွန့်သွားအောင် လီးကြီးက ဆောင့်ဝင်သွားသည်။
သော်ဇင်၏ ရင်ဘတ်ကြီးကိုဆီး၍ တွန်းထားလိုက်မိသည်။ နာကျင်သော ဝေဒနာသက်သာစေရန် ဇာလေးဖြူခြေနှစ်ဖက်ကို အစွမ်းကုန်ဖြဲကား၍ခံသည်။ သို့သော် ပေါင်ဖြဲသလောက် စောက်ပတ်ကလိုက်ပြဲသည် မဟုတ်တော့ လီးကြီးက ကျဉ်းမြောင်းကျစ်လစ်သော စောက်ခေါင်းလေးထဲသို့ ပြည့်ကြပ်စွာ တိုးဝင်နေပေသည်။
ဇာလေးဖြူ မည်မျှပင်နာကျင်စေကာမူ သော်ဇင်ကတော့ တစ်ပြားသားမျှမလျော့ပေ။ လီးကြီးကို လိုးသွင်းမြဲလိုးသွင်းနေသည်။ လီးတစ်ဝက်
ခန့်ဝင်သွားပြီး တင်းကြပ်နာကျင်သော ဝေဒနာကိုခံစားနေရသည်။
စောက်ခေါင်းအတွင်းမှ အပျိုမှေးလေးက အားတက်သရောရှေ့သို့တိုးဝင်လာသော လီးကြီးထိပ်အားဆီးကြို၍ခုခံတွန်းလှန်ပိတ်ဆို့လိုက်သည်။ ထိုအတွေ့ကြောင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် နာကျင်ခြင်းခံစားလိုက်ရရှာသော ဇာလေးဖြူခမျာ တစ်အားအော်လိုက်ပြီး မျက်ရည်ပေါက်လေးတွေ စို့ထွက်လာသည်။ အခြေအနေကိုသိလိုက်သော သော်ဇင်ကလည်း ဒီအတားအဆီးကို ချိုးဖောက်နိုင်ရန် အားယူပြီး လီးကိုဖိဆောင့်ချလိုက်သည်။
လီးကြီးမှာ သားအိမ်ဝသို့တိုင်အောင် အောင်မြင်စွာ လိုးဝင်သွားတော့သည်။ ဇာလေးဖြူမှာ တစ္ခ်က်သာ အော်လိုက်နိုင်ပြီး မျက်တောင်ကော့ကြီးများ မှေးစင်းပိတ်ကျသွားသည်။ စောက်မှေးပါးကို ထိုးဖောက်ကျွံဝင်သွားသော လီးကြီးနှင့်အတွင်းသား နုနုနွေးနွေးလေးများ ကြည်နူးစွာဆုံ
တွေ့မိသွားကြလေသည်။ မျက်တောင်ကြီးများ ကော့စင်းကျသွားသလို စောက်ဖုတ်လေးကလဲ ကော့၍တက်လာသည်။
သော်ဇင်၏ လက်နှစ်ဖက်က ဇာလေးဖြူ၏ နို့လေးနှစ်လုံးကို ယုယုယယလေးဆုပ်နယ်ရင်း အောက်ပိုင်းကလီးကြီးကတော့ စောက်ဖုတ် ဖွေးဖွေးဖောင်းဖောင်းလေးကို မညွာမတာ ကြမ်းတမ်းစွာလိုးဆောင့်နေတော့သည်။
ဇာလေးဖြူမျက်နှာလေး ဘယ်ညာယမ်းခါ၍နေသည်။ မဆန့်မပြဲဝင်နေသော လီးကြီးအား စောက်ခေါင်းအတွင်းသားလေးတွေက မနိုင်မနင်း
သော်ဇင်၏ ဆောင့်အားပြင်းထန်သလောက် လီးကြီးက အရသာတွေ့နေသလို ဇာလေးဖြူမှာလည်း စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေနီရဲပြီး
တက်လာပေမယ့် သော်ဇင်ဆောင့်လိုက်တိုင်း ခန်ဓာကိုယ်လေးကို တောင့်တောင့်ပြီး ကော့ကော့ခံသည်။ နှစ်ယောက်စလုံးကာမဇောက အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာကြပြီး မကြာမီအတွင်းမှာပင် သော်ဇင်နှင့်ဇာလေးဖြူတို့မှာပြိုင်တူနီးပါးပြီးသွားကြလေတော့သည်။
သွေးသားချင်းရော၍ ကာမသဘောစောကြောရုံဖြင့် အချစ်လို့ခေါ်ပါ့မလား..။ ဇာလေးဖြူ အရင်ထဲက သော်ဇင့်ကိုချစ်တယ်လို့ အဖြေမပေးခဲ့ဖူးပါ။ သူက ဇာလေးဖြူ၏ခန်ဓာကိုယ်နှင့်ကာမကို အရယူသွားနိုင်ခဲ့သည်။
အတွေ့ကြောင့် သွေးသားတွေ ဗြောင်းဆန်နေစဉ်က အသိတရားတွေ မှေးမှိန်၍နေခဲ့ရသော်လည်း သွေးသားများ အစွမ်းကုန်ထကြွပြီး ပြန်လည်ငြိမ်သက်သွားရာတွင်တော့ အသိတရားတွေက ထင်းကနဲ လင်းလာခဲ့သည်။ ဇာလေးဖြူ အတင်းရုန်းကန်ပြေးထွက်ခဲ့သည်။ သော်ဇင်ကလည်း သူမ၏အပျိုစင်ဘ၀ကို အရယူနိုင်ခဲ့ပြီမို့ သူမကိုမတားဆီးခဲ့တော့ပါ။
သူမတစ်ကိုယ်လုံး နာကျင်ကိုက်ခဲ၍နေသည်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ သူမကိုယ်သူမ မသတီသည်မို့ တစ်ကိုယ်လုံးကိုချေးချွတ်ရေ
ချိုးပစ်လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သောက်ကာ စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်လာသည်မို့ အိမ်ကိုနေမကောင်းဘူးဟု အကြောင်းပြကာ
ဇာလေးဖြူမည်မျှကြာအောင်အိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်မသိ။ အိပ်ခန်းတံခါးကို တဒေါက်တဒေါက်ခေါက်သော အသံကြားရမှ နိုးလာခဲ့သည်။ ဇာလေးဖြူ အိပ်ခန်းတံခါးဖွင့်လိုက်လျှင် သူဗြုံးကနဲ တွေ့မြင်လိုက်ရသောသူက ညိုးငယ်သော မျက်နှာထားနှင့် မြင့်ကျော်ပင်ဖြစ်သည်။ လက်ထဲ
က အငွေ့တထောင်းထောင်းထနေသော ဟင်းသောက်ပန်းကန်လုံးကြီးတစ်လုံးကို လင်ဗန်းငယ်တစ်ချပ်ပေါ်တွင် တင်၍ကိုင်လာသည်။ အနံ့ရလိုက်သည်နှင့် သူမသိပ်ကြိုက်သော ကြေးအိုးဆိုသည်ကို ဇာလေးဖြူသိလိုက်သည်။
ညီမေလး နေမကောင်းဘူးဆိုလို့ အစ်ကိုသွားဝယ်လာတာ.
မြင့်ကျော် မျက်ခုံးတစ်ဖက်မြင့်တက်သွားသည်။ ပေးလေ ဆိုသော အသံလေးက သူမနှုတ်ဖျားမှ တစ်ခါဘူးကမှ မြင့်ကျော်မကြားဘူးခဲ့သော
နူးညံ့လွန်းလှသည့် လေယူလေသိမ်း အသံလေးဖြစ်သည်။ သူလှမ်းပေးသည်ကိုယူ၍ ဇာလေးဖြူ အိပ်ခန်းဖက်ပြန်လှည့်လိုက်သည်။
၀င်လေ အစ်ကို..ဒါ ကိုယ့်ညီမ အခန်းပဲဟာ.
ပြန်ထွက်မသွားသေးဘဲ နောက်တွင် ရပ်လျက်ရှိနေသည့် မြင့်ကျော်ကို သူမခြေလှမ်းပြင်ရင်လှည့်ပြောသည်။ မြင့်ကျော် ရဲရဲဝင့်ဝင့်ကြီးသူမနောက်မှ လိုက်ပါလာခဲ့သည်။ အိပ်ခန်းထဲမှ စာရေးစားပွဲလေးပေါ်သို့ ကြေးအိုးပန်းကန်ကို တင်လိုက်ပြီး သူ့ကိုလှည့်ကြည့်သည်။
ဇာလေးဖြူ ထိုင်လိုက်ပြီး ပန်းကန်ထဲမှကြွေဇွန်းလေးကို ကောက်၍ကိုင်လိုက်သည်။ သူမ၏လက်လေးတွေက တဆတ်ဆတ်တုန်၍နေသည်။
ဟင်ညီမေလး နေ.နေ.အစ်ကို တိုက်မယ်..
မြင့်ကျော် ပြာပြာသလဲ သူမ၏လက်ထဲမှ တဆတ်ဆတ်ခါနေသော ကြွေဇွန်းလေးကို ယူလိုက်သည်။ ပြီးတော့ ကြေးအိုးကို ငုံးဥလေးပါအောင် ခပ်လိုက်ပြီး သူ့ပါးစပ်နှင့် အေးသွားအောင်မှုတ်သည်။ သူ့မျက်နှာနှင့် တစ်ပေခန့်သာကွာဝေးသည့် ဇာလေးဖြူ၏မျက်နှာကို သူမကြည့်သေး။ ဇွန်းထဲမှ ငုံးဥနှင့်အရည်လေးများ အထိုက်လျောက်အေးသွားစေရန်ကိုသာ သူအာရုံရောက်နေသည်။ အတန်ငယ် အေးသွားလောက်တော့မှ..
ရော့ ညီမေလး သောက်လိုက်
ဇာလေးဖြူ၏ မျက်နှာကိုကြည့်၍ဇွန်းကို သူမ၏ နှုတ်ခမ်းရဲရဲလေးတွေနားတိုးကပ်၍တိုက်သည်။ မြင့်ကျော် ပထမဆုံးသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေသော
မျက်ရည်များပြည့်နှက်နေသည့် ဇာလေးဖြူ၏ မျက်ဝန်းများကို သူရင်ဆိုင်တွေ့လိုက်ရသည်။ နှုတ်ခမ်းဖျားသို့ ဇွန်းလေးရောက်လာတော့ ဇာလေး
မျက်ရည်များနှင့် ပြုံးနေသော ဇာလေးဖြူ၏ မျက်နှာလှလှလေးက မြင့်ကျော်၏အသည်း
နှလုံးကိုဆုပ်ယူဆွဲခါလိုက်သည်။ အပြုံးလေးနှင့်အတူ ဇာလေးဖြူ၏ လက်လေးတစ်ဖက်က ဇွန်းကိုင်ထားသော မြင့်ကျော်၏လက်ဖမိုးပေါ်ရောက်
၍လာပြီး နီစွေးသော သူမ၏နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကိုအထဲမှ ဖြူဖွေးညီညာသောသွားလေးများပေါ်လာသည်အထိဖွင့်ဟ၍ ကြွေဇွန်းထဲမှငုံးဥနှင့် အရည်လေးတွေကို သောက်လိုက်သည်။
မြင့်ကျော် ကြေးအိုးတစ်ဇွန်းပြီးတစ်ဇွန်း မှုတ်၍တိုက်သည်။ ဇာလေးဖြူမျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်များ တဖြေးဖြေးခန်းခြောက်၍သွားသော်လည်း
ကြေးအိုးလှမ်းတိုက်လိုက်သည့် မြင့်ကျော်၏ လက်ဖမိုးကို သူမ၏လက်လေးနှင့် လှမ်း၍လှမ်း၍ ဆုပ်ကိုင်လိုက်တိုင်း ဖန်တီးဖြစ်ပေါ်လာသော သူမ
၏ အပြုံးလေးကတော့ပျောက်ကွယ်၍မသွားပေ။ ကြေးအိုးပန်းကန်တစ်ဝက်ကျိုးသွားချေပြီ။
ဇာလေး တော်ပြီ အစ်ကို
တစ်ဝက်ကြီးများတောင် ကျန်သေးတယ်. သောက်လိုက်ပါဦးလား..
ဟင့်အင်း.ဇာလေး မသောက်နိုင်တော့ဘူး.. ထားခဲ့လေ..ဆာတော့ ထပ်သောက်မှာပေါ့..
သူမရှေ့မှ ငြင်သာစွာထ၍ ကြင်နာစွာ ကြည့်ပြီးထွက်သွားသည့် မြင့်ကျော်၏ကျောပြင်ကြီးကို ကြည့်ရင်း စောစောကခြောက်သွေ့သွားခဲ့ပြီဖြစ်သော မျက်ရည်များကဗြုံးကနဲ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက် ကျ၍လာသည်။ မြင့်ကျော်လည်း အခန်းဝက ထွက်သွားရော ဇာလေးဖြူ အိပ်ယာပေါ်ပြေးတက်ပြီး ခေါင်းအုံးပေါ်မှောက်ကာရှိုက်ကြီးတငင်အားပါးတရ ငိုချလိုက်တော့သည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားတွင် ဂရုစိုက်မှု၊ ကြင်နာမှု၊ ယုယမှုတွေက ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများ ပြည့်နှက်ပါဝင်နေသည်ဆိုတာကို ဇာလေးဖြူ ထင်ထင်လင်းလင်းသိခဲ့ရပေပြီ။ ထို့အတူ အထင်ကြီးမှု၊ အားကျမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည့် ခင်မင်စိတ်ကိုလည်း အချစ်လို့ထင်မြင်မိခဲ့လို့ စော်ကားခံခဲ့ရတာကိုလည်း ဇာလေးဖြူနဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ တွေ့ခဲ့ရပြီ။
ဇာလေးဖြူ အိမ်တွင်ကုတ်၍နေခဲ့သည့်ရက်တွေ၌ မြင့်ကျော်၏သူမအပေါ်ထားရှိသည့် မေတ္တာ၊ အကြင်နာတွေကို ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထိတွေ့ခံစားခဲ့ရသည်။ ငါအစ်ကို့ကို ချစ်မိနေပြီလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဇာလေးဖြူ မကြာခဏ သူမကိုယ်သူမပြန်၍ မေးမြန်းနေမိသည်။
ခါတိုင်းထက် အစ်ကို့ကိုပိုပြီး ခင်တွယ်လာမိတာတော့ အမှန်ပင်။ အစ်ကိုလိုက်မပို့နိုင်သောနေ့များတွင် တစ်ဦးတည်းကျောင်းသို့လာရသည့်အခါများ၌ ဇာလေးဖြူစိတ်ထဲလှုပ်ရှားနေရသော စက်ရုပ်တစ်ရုပ်နှယ် သူမ ကိုယ်သူမ ခံစားနေရသည်။
ညီးက ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် ငါကေတာ့ ဒီနေ့က ကိုကိုက ညီးနဲ့မပါလာတော့ ငါ့ရင်ထဲမှာတစ်မျိုးဘဲ.. အဟိ
ဇာလေးဖြူ သူငယ်ချင်းမလေးတွေကိုကြည့်ပြီး သက်ပြင်းချလိုက်သည်။
ငါ ရှင်းရှင်းဘဲပြောမယ်ဟာနင်နဲ့အစ်ကိုနဲ့ကလည်း ဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူး.ငါကြိုပြောထားသင့်တယ်..နင်နဲ့သဘောမတူဘူးဆိုတာထက် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ငါပြောချင်တယ်
ဇာလေးဖြူ သူမကိုယ်သူမပင် ဒီစကား ဘယ်လိုထွက်သွားသလဲ သတိမထားမိလိုက်။ ပြာဖုံးနေသော အချစ်မီးခဲလေးက တိုက်ခတ်လိုက်သော လေကြောင့်နီရဲသွားပြီ။ သူမအစ်ကို့ကို ချစ်မိနေပြီဆိုတာကိုလည်း
မေခင် စိတ်ရှုပ်ပုံဖြင့် ခေါင်းကုတ်ရင်းပြောသည်။
သူက ဖေဖေ့သူငယ်ချင်းရဲ့သား.လူကြီးတွေက ငါတို့ငယ်ငယ်ထဲက သဘောတူထားကြတာ..ကဲ အတန်းချိန်နီးပြီ သွားကြမယ်..
ဟဲ့ နေအုံးနေအုံး..နင်ကရော သူ့ကို ဘယ်လိုသဘောထားလဲ..
ဟင် နင်တို့နင်တို့ ငါ့ကို ကဲဟာ..ကဲဟာ.
ဇာလေးဖြူ ရှက်ရှက်ဖြင့်အနီးဆုံး မေခင်ကို ထုရိုက်ပစ်လိုက်သည်။ ဇာလေးဖြူ အရိပ်အကဲကိုဖမ်းမိနေသော သူငယ်ချင်းမလေးများက သူတို့အချင်းချင်းတိုင်ပင်၍ ဇာလေးဖြူ၏ အတွင်းစိတ်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းပင်
အစ်ကို့အပေါ်မှာ ငါတရားရဲ့လား ဆိုသောမေးခွန်းကို ဇာလေးဖြူ သူမကိုယ်သူမ မကြာခဏမေးနေမိသည်။ ငါ့ရဲ့မသန့်ရှင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အစ်ကို့ကိုချစ်လို့ ငါတရားပါ့မလားအို.မသန့်ရှင်းဘူးဆိုတာ
ဘာလဲ ငါအရင်ကချစ်သူထားခဲ့ပြီး လွန်လွန်ကြူးကြူး ဖြစ်ခဲ့တာမှ မဟုတ္တာဘဲငါ့ကိုအဓမ္မကြံလို့ ဖြစ်ခဲ့ရတာဘဲ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို ငါပြောခဲ့ဖူးတာမှမဟုတ်တာ၊ နောက်ပြီး ငါ့ရင်ထဲကလည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ ချစ်ခဲ့ဘူးတာမှ မရွိတာ.ငါခ်စ္တာ အစ်ကို့ကိုဘဲအစ်ကိုဟာ ငါ့ရဲ့အချစ်ဦးပဲ..မသန့်ရှင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လို့ပြောရအောင်လဲ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေဖြစ်ပြီး ကျန်ခဲ့လို့လဲ.အစ်ကို့အတွက် နစ်နာစရာတွေ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေရှိလို့လဲ. တွေးရင်း ဇာလေးဖြူမှန်တင်ခုံရှေ့သို့သွား၍ ရပ်လိုက်သည်။
ပြီးတော့ ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ကြီးရှေ့တွင် သူမ၏ ကိုယ်ပေါ်မှ အ၀တ်အစားတွေကို တစ်လွှာခြင်းချွတ်ပစ်သည်။ နောက်ဆုံးခါးမှ ထဘီလေးကိုချွတ်၍ မှန်တင်ခုံရှေ့ရှိ ခွေးခြေလေးပေါ်တွင်တင်လိုက်သည်။ ဇာလေးဖြူ ၀တ်လစ်စလစ်ဖြစ်သွားသော သူမ၏ကိုယ်လုံးလေးကို မှန်ထဲတွင်လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနေမိသည်။
အစ်ကို့အတွက် င့ါတစ်ကိုယ်လုံးဟာ စင်းလုံးချောလှနေတာပဲဟာ
ဇာလေးဖြူ စိတ်ထဲသန့်၍သွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်။ ပြန်ဝတ်ရန်အတွက် သူမရှေ့ရှိခွေးခြေလေးပေါ်မှ ထဘီလေးကိုလှမ်း၍ဆွဲယူလိုက်သည်။
အိပ်ခန်းတံခါးကို တွန်းဖွင့်၍၀င်လာသော မြင့်ကျော်မှာ ဇာလေးဖြူရှေ့တွင်ခြေစုံရပ်၍မျက်လုံးအစုံကို မှိတ်ပစ်လိုက်သည်။ ဇာလေးဖြူက လက်ထဲမှ မ၀တ်ရသေးသော ထဘီလေးဖြင့် သူမရှေ့ပိုင်းကို ကာကွယ်ပါသော်လည်း မြင့်ကျော်ကတော့ ဇာလေးဖြူ၏မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း အလှကို လုံးလုံးလျားလျားတွေ့မြင်သွားခဲ့ရသည်။ ဇာလေးဖြူ သူမ၏ရှေ့မှလက်တစ်ကမ်းအလိုတွင်ရှိသော မြင့်ကျော်၏ရင်ခွင်ထဲသို့တိုးဝင်လိုက်သည်။
လက္တစ္ဖက္က မြင့်ကျော်၏ခါးကိုဖက်လိုက်ပြီး သူမ၏မျက်နှာလေးက မြင့်ကျော်၏ ရင်အုပ်ကျယ်ကြီးကို ပါးအပ္ကာ ပွတ်သပ်လျက်ရှိသည်။ မြင့်ကျော်၏လက်နှစ်ဖက်က ဇာလေးဖြူ၏ကိုယ်လုံးတီးလေးကို တင်းကြပ်စွာ ဖက်လိုက်ပြီး သူမ၏ပါးလေးကို ငုံ့၍နမ်းသည်။ ၀မ်းသာကြည်နူးမှုဖြင့် ဇာလေးဖြူက သူ့မျက်နှာကို မော့၍ကြည့်လိုက်တော့ သူမ၏နီစွေးသော နှုတ်ခမ်းလေးတွေက သူ့နှုတ်ခမ်း ထူထူကြီးများကြားတွင် ပါသွားသည်။
နှစ်ကိုယ်ကြားတွင် ဇာလေးဖြူလက်လေးတစ်ဖက်နှင့် ဆွဲကိုင်ထားသော သူမ၏ထဘီလေးက လက်ကလွတ်လျက် ကြမ်းပြင်ပေါ်လျှောကနဲ ကျ၍သွားသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်တို့၏ ထိတွေ့မှုက
အသိတရားနှင့် ဆင်ခြင်တုံတရားတို့ကို တဒင်္ဂမှေးမှိန်စေသည်။
မြင့်ကျော် ဇာလေးဖြူ၏ ကိုယ်လုံးတီးလေးကို စွေ့ကနဲပွေ့၍ ကုတင်ပေါ်တင်ပေးလိုက်ပြီး သူကပါ ကုတင်ပေါ်တက်လိုက်သည်။ ပြီးလျှင် မျက်လုံးအစုံမှိတ်၍ ရင်တွေတစ်ဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေသော ဇာလေးဖြူ၏ ရွှေရင်နှစ်မွှာကို လက်ဖ၀ါးဖြင့်အုပ်ကာ ပွတ်သပ်ကစားပြီးငုံ့၍စို့သည်။ သူတပြွတ်ပြွတ်စုိ့သမျှ ဇာလေးဖြူ၏ရင်အုံလေးက ကော့၍ကော့၍ တက်နေရသည်။
မြင့်ကျော်၏လက်တစ်ဖက်က သူမ၏ပေါင်ကြားသို့ ရောက်သွားပြီး ကြောင်လေးတစ်ကောင်၏ အမွှေးလေးတွေကို ပွတ်သပ်သလို ဇာလေးဖြူ၏ အမွှေးလေးတွေကိုပွတ်သပ်ရင်း ပေါင်နှစ်လုံးကြားသို့ သူ့လက်က လျှောကနဲဆင်းသွားရာမှ စောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းသားကြီးများကို သူ့လက်ဖ၀ါးကြီးဖြင့် ထက်အောက်စုန်ဆန် ဖွဖွရွရွလေးပွတ်၍ပေးသည်။ ခ်စ်သူ၏ ကြင်နာယုယမှုတွေက ဇာလေးဖြူ၏ရင်အတွင်းသို့တိုင် တုန်ရင်လှိုက်မော၍နေရသည်။
သူမ၏ သံရှည်လေးများဖြင့် ညီးသံအဆုံး မြင့်ကျော်က သူ့ပုဆိုးကိုချွတ်ပြီး ဇာလေးဖြူပေါ်သို့ ခွတက်လိုက်သည်။ ချိန်သားမကိုက်ဘဲ အပေါ်ဖက်သို့ နဲနဲရောက်သွားသဖြင့် ထောင်မတ်နေသောလီးကြီးက ဆီးခုံလေးပေါ်သို့ရောက်၍နေပြီး လုံးတစ်နေသော အုကြီးက စောက်ပတ်ရှေ့တွင်ကပ်၍နေသည်။ ချိန်သားကိုက်အောင် မြင့်ကျော်အောက်သို့ ပြန်၍လျှောမချမီမှာပင် ဇာလေးဖြူက သူမ၏ ကိုယ်လုံးတီးလေးကို လူးလွန့်၍ ခေါင်းရင်းဖက်သို့ တဖေးဖြေးလေးတိုးလိုက်တော့ လီးချောင်းကြီးက တဖြေးဖြေးလျှောဆင်းသွားပြီး လီးထိပ္က စောက်ပတ်ဝသို့ထောက်မိသွားသည်။ စိုစွတ်မှုက လီးထိပ်ကြီးကိုထိတွေ့လိုက်သည်နှင့် မြင့်ကျော်
တစ်ကိုယ်လုံးကြက်သီးထသွားသည်။ ချက်ချင်းပင် သူ့တင်ပါးကြီးများ၏ အားကိုယူ၍ လိုးသွင်းလိုက်သည်။
လမ်းကြောင်းတွင် ချောဆီများပြည့်လျှံသလို ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် လီးကြီးက တစ်ဆုံးကျွံဝင်သွားသလို မြင့်ကျော်၏ ကိုယ်လုံးကြီးကလည်း သူမ၏ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချလိုက်ပြီး သူမ၏ မျက်နှာလေးကို တဖွဖွနမ်း
တဖွတ်ဖွတ်တပြွတ်ပြွတ်အသံများက စီးခ်က္က်က် ထွက်ပေါ်နေရာမှ တဖြေးဖြေးမြန်ဆန်၍စိပ်လာသည်။ ဇာလေးဖြူက မြင့်ကျော်၏ကိုယ်လုံးကြီးကို တင်းကြပ်စွာဖက်ပြီး ချစ်သူအလိုကျ ကော့ကော့ပေးနေရင်းမှ သူမ၏ကိုယ်လုံးလေး ဆတ်ကနဲကော့တက်သွားသည်။
နောက်ဆုံး အားရပါးရဆောင့်ချလိုက်သော လီးကြီးနှင့်အတူ မြင့်ကျော်၏ခါးကြီးမှာ တတွန့်တွန့်ဖြစ်သွားရတော့လေသည်။